DHAGEYSO: Ra’iisul Wasaare Rooble ”Waa ka xumahay wixii maanta iyo xalay ka dhacay Muqdisho” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Ra’iisul Wasaare Rooble ”Waa ka xumahay wixii maanta iyo xalay ka...
DHAGEYSO: Ra’iisul Wasaare Rooble ”Waa ka xumahay wixii maanta iyo xalay ka dhacay Muqdisho”
Ra'iisul Wasaaraha XF Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaaraha XF Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay rabshadihii xalay iyo maanta ka dhacay Caasimadda Muqdisho.
Mr Rooble ayaa sheegay in uu dadaal badan ku bixiyay in uu baaqdo banaanbaxa, laakiin ay ka biyo diideen Madaxda Midowga Musharraxiinta oo uu sheegay in ay tilmaameen in dalka aysan ka jirin doorasho.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa mucaaraadka ku tilmaamay in ay weerareen Saldhigayada Ciidanka dowladda Soomaaliya, islaamarkaana ay tahay taasi wax laga xumaado.
Si kastaba, Labo weerar ayaa xalay iyo maanta lagu qaaday Midowga Musharraxiinta, waxaana ay sheegeen in qaarkood ay ka badbaadeen isku day dil la rabay in lagu khaarijiyo.
Halka hoos ka dhageyso Codka Ra’iisul Wasaare Rooble:
Banaanbax rabshado wata